Habka sawirku wuxuu u yimaadaa iPhone 7 Plus oo leh beta-ka iOS 10.1 | Waxaan ka socdaa mac
Sidii aan kuugu sheegnay Applelizados, shalay galab Apple waxay sii deysay beta-kii ugu horreeyay ee loogu talagalay soosaarayaasha iOS 10.1, oo ah cusbooneysiinta xigta ee nidaamka cusub ee mobile-ka ee Apple ee iPhone, iPad iyo iPod taabashada. In kasta oo markii hore ay u muuqatay in noocyadan hordhaca ahi ay ku xaddidan yihiin hagaajinta cilladaha caadiga ah iyo hagaajinta xasilloonida guud ee nidaamka, wax yar ka dib markii la ogaaday in ay ku jirto sheeko cusub oo horay loo sii sheegay intii lagu jiray Muhiimmadii ugu dambeysay Sebtember XNUMX.
Beta-ka cusub ee iOS 10.1 waxaa kujira qaabka kamaradaha cusub ee "Portrait" ee loogu talagalay dadka isticmaala iPhone 7 Plus, oo bilawgooda aan lagu sameyn karin isku mar iibinta terminal-ka ee aan la diyaarin. Qaabka cusub ee Sawirka waxaa loogu talagalay in lagu ekeysiiyo nooca qoto dheer ee aagagga sawirada lagu qaadan karo kamarad heer sare ah oo DSLR ah., oo muujinaya shay hordhac ah oo ka soo horjeeda asalka cilladda.
macruufka 10.1 beta wuxuu bilaabayaa qaabka Sawirka cusub ee ku dayashada kamaradaha SLR
Laba toddobaad ka dib markii lagu dhawaaqay inta lagu gudajiray Muhiimka ee iPhone 7 iyo Apple Watch Series 2, iyo hal usbuuc kadib markii si rasmi ah loo bilaabay nidaamka cusub ee mobilada ee hawlgalka iOS 10, Habka Sawirka cusub ayaa hadda loo heli karaa iPhone 7 PlusIn kasta oo xilligan kaliya horumariyayaashu ay ku raaxeysan karaan iyada oo loo marayo nooca beta-ka ugu horreeya ee iOS 10.1.
Qaabka sawirku wuxuu ku saabsan yahay qaadashada sawir sheyga dareenka ayaa lagu muujiyey ka soo horjeedka asalka oo ah mid cilladaysan ama midab leh. Si loo gaaro dhammeystirkan, processor-ka isku dhafan ee muuqaalka muuqaalka ee Apple ayaa baaraya goobta, isagoo adeegsanaya farsamooyinka barashada mashiinka si uu u aqoonsado dadka sawirka ku jira. Halkaas, khariidad qoto dheer oo muuqaal ah ayaa laga abuuray labada kamaradood ee lagu soo daray iPhone 7 Plus, iyadoo dadka lagu hayo feejignaan iyadoo la adeegsanayo saamayn taban inta ka hartay sawirka ka muuqda asalka.
Haddii aan isbarbar dhigno sawirka kore iyo ka hooseeya xariiqyadan, waxaan arki karnaa farqiga u dhexeeya sawir laga qaaday sida caadiga ah, iyo isla sawir laga helay qaabka cusub ee Sawirka ee iOS 10.1 ee iPhone 7 Plus.
Sida laga soo xigtay TechCrunch, Qaabka cusub ee loo yaqaan 'Portrait mode' ee Apple wuxuu ku saleysan yahay tikniyoolajiyada la helay ka dib iibsiga shirkadda LinX. Habka "Portrait" wuxuu adeegsadaa muraayadaha '56mm lenses' si uu u soo qaado sawirka, halka muraayadaha balaaran ay soo uruuriso xogta aragtida si ay u dhisto khariidadaas qoto dheer ayna u kala qaybiso sawirka lakab.
Muuqaalkan cusub, oo u gaar ah iPhone 7 Plus maxaa yeelay waa nooca keliya ee lagu daro kamaradda laba-geesoodka ah, waxay ku dayanaysaa saameynta lagu gaaro kaamirada sare ee DSLR. Diyaar uma ahayn bilawga iPhone 7 Plus si kastaba ha noqotee, Apple wuxuu ballanqaaday inuu gadaal ka soo bandhigi doono, wax ku dhacay bilowga beta-kii ugu horreeyay ee iOS 10.1 ee soo-saareyaasha.
Ragga ku jira MacRumors mar hore ayey hoos u soo degeen inay shaqeeyaan oo ay awood u yeesheen inay tijaabiyaan faa'iidooyinka qaabkan Sawirka cusub oo shaki la’aan ah, oo ay weheliso inta kale ee astaamaha ku jira kamaradda, oo ka mid ah dhiirrigelinta weyn ee helitaanka iPhone-ka. 7 lagu daray.
Habka sawirku wali wuxuu ku jiraa wajigii tijaabada beta oo buuxa oo sida muuqata, waxaa jira faahfaahin qaar oo Apple uusan wali nadiifin.
Sida laga soo xigtay shirkadda, isticmaalkeedu runtii waa wax fudud, tan iyo qaabka cusub wuxuu ku xigaa xulashooyinka kamaradaha intiisa kale sida "1: 1", "Video" ama "Panoramic". Sidaa darteed, adeegsadayaashu waa inay doortaan qaabkan iyaga oo u rogaya bidix ama midig, dhibic iyo toogasho. Xitaa waxaa ku jira horudhac shaashadda oo noo oggolaaneysa inaan aragno sida sawirku noqon doono ka hor intaadan qaadin.
Xusuusnow in qaabka sawirka cusub lagu heli karo oo keliya nooca beta-ka ee iOS 10.1 ee soo-saareyaasha, in kasta oo ay u badan tahay maalmo gudahood, laga yaabee toddobaadkan, waxaa loo sii deyn doonaa dadka isticmaala ee ka diiwaangashan barnaamijka beta-ka dadweynaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Habka sawirku wuxuu u yimaadaa iPhone 7 Plus oo leh beta-ka iOS 10.1